Yoshitoshi, iray amin'ireo mpanao sokitra Japoney fanta-daza indrindra | Famoronana an-tserasera
Tao anatin'ny folo taona lasa dia teo izahay teo alohan'izay mpanakanto sy sary an-tsary mahafinaritra avy any Japon ary izy ireo no nialoha lalana an'ilay manga. Sombin-tantara an-tsary Japoney vitsivitsy izay niely hatraiza hatraiza ary ankehitriny dia tototry ny magazay rehetra izay mbola misy any amin'ny tanàna sy tanàn-dehibe sasany amin'ny firenentsika.
Talohan'io anime io dia nisy mpanakanto sary an-tsary sasany izay Nanangona kolontsaina japoney kilasika izy ireo toy ny tsukioka Yoshitoshi lehibe, mpanao sokitra taonjato faha-XNUMX. Mpana sary amin'ny androny izay nanehoany tamin'ny alàlan'ny sokitra ireo lafiny niavaka indrindra tamin'ny kolontsain'ny firenena Japoney.
Ukiyo-e no teknika sokitra ampiasan'ity Mpanamboatra japoney tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary io dia endrika tapa-kazo izay azontsika lazaina ho toy ny sary hosodoko amin'ny tontolo mitsingevana. Ny sary sokitra izay nisy lanjany lehibe teo amin'ny mponina iray izay amidy amina boky kokoa ny sary raha aseho amin'ny sary.
Izany dia nanjary fanontana printy tsy miankina ary a vokatra toy ny manga ankehitriny. Ny mahatsikaiky dia ny kolontsaina avo lenta ka hatramin'ny famafanafana, izay saika mikasika ny lohahevitra rehetra izay noheverina ho saranga antonony kokoa noho ireo izay nanana toerana ambony indrindra.
Tsukioka dia namokatra sanganasa sary an'ny firaisana ara-nofo, herisetra ary horohoro ary aseho ireo ady an-trano mihosin-dra izay resahintsika ankehitriny hoe gore. Mpanakanto iray izay tsy maintsy niatrika ny fiainany, ankoatry ny lazany lehibe, niaraka tamin'ny aretin'ny vy izay nitohy niharatsy hatrany mandra-panekena azy hopitaly ara-tsaina ho faty ny 9 Jona 1892 tamin'ny faha-XNUMX taonany.
Mpanazava iray izay nanana mpianatra maherin'ny valopolo ary noderaina tamin'ny asany "Zato Zato amin'ny volana" izy, andiana rakipeo mampiseho tantara sy angano Japoney sy Sinoa.
Mpanakanto tokana ho azy fahatsapana sy fiderana ny vehivavy izay nasehony, raha eo amin'ny sanganasany dia misy ny endrik'olombelona bebe kokoa, na dia mikasika lohahevitra samihafa aza izy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Kolontsaina Japoney kilasika avy amin'ny tanan'i Yoshitoshi lehibe